China China emeputa waterproof 130x10mm osisi plastic mejupụtara WPC mgbidi cladding emepụta na suppliers | Lihua
China emeputa waterproof 130x10mm osisi plastic mejupụtara WPC mgbidi cladding
Onye nwe ya:WPC Mgbidi Mgbidi
Ahịa:$ 1.61 / M
Agba:Kọfị, chọkọletị, osisi, osisi uhie, osisi sida, ojii, isi awọ, wdg
Etiti oge:15-25 YBỌCH.
2.2m, 2.9m, 3.6m ma ọ bụ ahaziri
Villa, ụlọ ụlọ
Sanding na mkpọchi
● Mgbidi WPC anyị mara mma ma mara mma ọdịdị osisi ọka, na-emetụ aka na ntinye dị mfe, yabụ nwere ike izute ihe dị iche iche nke ndị ahịa. , ogige, nnukwu ụlọ ahịa, wdg.
Anyị WPC mgbidi cladding bụ gburugburu ebe obibi enyi na enyi, n'ụzọ zuru ezu recyclable na ọ dịghị ọzọ ihe ize ndụ chemical, ọ dịghị mkpa sere, ọ dịghị mama na ala mmezi.
● Mgbidi mgbidi anyị nwere ikike ihu igwe dị mma, ọ nwere ike ịdị mma site na -40 ℃ ruo + 60 ℃ .Ihe mgbochi WPC anyị na-eguzogide ihu igwe, mgbochi mgbochi, obere mgbawa, agha, ụkwụ na-enweghị ụkwụ. Ezi nguzogide nguzogide mmiri na okpomọkụ.
● WPC mgbidi cladding na a eke osisi anya maka ụlọ n'èzí, anyị WPC mgbidi cladding nwere ọtụtụ nkọwa iji mejuo dị iche iche ahịa mkpa na chọrọ. WPC mgbidi cladding nwere mma n'ibu arụmọrụ. Emegharịrị 100%, enyi na enyi, na-echekwa oke ohia. Agba na nha nwere ike ahaziri gị mkpa, biko chere free ịjụ anyị.
Resistanceda iguzogide oke mmetụta EN 15534-1: 2014 Nkebi7.1.2.1
EN 15534-5: 2014 Nkebi 4.5.1 Enweghị nke ịkọ nkọ ga-ada Onweghị nke gbawara agbawa nke ule ahụ
EN 15534-5: 2014 Nkebi 4.5.5 Ntughari n'okpuru ibu nke 500N ≤5.0mm Ike mbughari Ike kachasị dị na mgbaji Ihu Ihu: Oke kachasị: Pụtara 1906Ngosipụta na 250N: Pụtara 0.64mm ihu ihu:
Max ọzịza: ≤12% na ọkpụrụkpụ, ≤2% n'obosara, ≤1.2% n'ogologo Mmiri absorption:
Pụtara: ≤8%, Max: ≤10% Mgbapu pụtara: 2.25% na ọkpụrụkpụ, 0.38% n'obosara, 0.15% n'ogologo
EN 15534-5: 2014 Nkebi 4.5.6 Ike na ọdịda: 479N, Uru pụtara: 479N,
Nke gara aga: China emeputa 3D embossed 157x16mm fireproof osisi plastic mejupụtara WPC mgbidi cladding
Osote: Nchedo gburugburu ebe obibi eji achọ ihe mma ebe ị na-etinye osisi WPC
Q1: Gịnị Bụ Isi Uru Nke WPC ngwaahịa?
A: Nke mbụ, ihe osisi plastik bụ 100% recyclable; ọ na-adịte aka, na-akwụsi ike maka ọnọdụ dị n'èzí, dị ka ikpughe anyanwụ, mmiri ozuzo, okpomọkụ wdg Ọ chọrọ nhazi dị ala, wdg.
Q2: Gini mere ndi ozo ji di nkpa maka ntinye?
Azịza: Mgbe anyị rụnyere ụlọ, na mbụ, a na-ejikọ eriri ahụ na T-clip ma anyị tinye bọọdụ ahụ na keels. Know maara na WPC decking osisi enweghị ike itinye ya n'elu ala ozugbo. Maka otu ihe, ọ nwere ike imetụta ịdị larịị nke ala ala mgbe etinyere ya. Maka ihe ọzọ, ọ dịghị mma ịchịkwa nsị nke ala, n'ihi na a na-ejikarị bọọdụ WPC decking maka mpụga, nke mmiri ozuzo na-ezo. Ya mere, a ga-eji keels jide WPC decking board mgbe arụnyere.
Q3: Ọ bụrụ na e nwere otu mpempe akwụkwọ osisi ahụ agbajiri, ọ dị mkpa ka anyị wepụ osisi decking niile iji rụkwaa ya?
A: Mba. Ọ bụrụ na dochie anya osisi ahụ agbajiri agbaji, ịkwesịrị imebi obere mkpirisi akụkụ abụọ nke decking agbajiri agbaji wee wepụ osisi ahụ gbajiri agbaji, ọ dị mfe.
Q4: Njupụta na ike nke decking?
A: Njupụta nke decking WPC anyị bụ 1.3% -1.4% (1300-1400kgs / CBM). Ike nke oghere bụ ihe dịka 320kgs (Nke ahụ bụ ịsị, dabere na oghere dị n'agbata eriri nke 35cm, ihu elu nwere ike iburu 320kgs.) Ike nke onye siri ike bụ 400kgs-500kgs. (Nke ahụ bụ kwuo, dabere na oghere dị n'agbata eriri 35cm, ihu elu nwere ike ibu 400kgs-500kgs.)
Q5: Kedu asambodo ị nwere?
A: ISO9001, ISO14001, CE, CO, INTERTEK, SGS, FORM E / A certifications etc. 100% quality check before each of Mbupu.
Q6: Gini bu ugwo ugwo gi?
A: Nabata ịkwụ ụgwọ site na T / T (nnyefe ego), Western Union, na PayPal. Nabata L / C na anya.
Q7: Tụnyere ezigbo osisi, olee uru nke WPC?
Azịza: N'oge na-adịghị anya, WPC abụghị naanị nnukwu ike, kamakwa ọkụ na-egosi. Waterproof.Fire-retarding, Termite proof, Recycled, Nature osisi ọka, Low mmezi, Easy iji wụnye, ọ dịghị egbu egbu wepụtara.
Q8: ị nwere ike ịme ụcha ọkụ? dị ka ọcha?
A: Ee, anyị nwere ike, agba enweghị nsogbu, co-extrusion nwere agba dị iche iche, biko gwa anyị ụdị agba ịchọrọ.
Q9: Tụnyere ezigbo osisi, olee uru WPC nwere ike ịgwakọta agba 2 n'otu usoro?
A: Ee, ị nwere ike! Ma ọ bụrụ na ndị na-erughị 100 na-erughị square mita maka otu agba, anyị ga-ana ụma set-elu fee.We bụ a kpọmkwem factory na ndị ọzọ na agba nwere ike họrọ, ndị ọzọ na-eri gụnyere ihe na ọrụ anyị ga-atụkwasị, anyị ga-achịkwa ọnụahịa ngwaahịa na olileanya ndị ahịa nwere ike ịghọta nke a.
Q10: Gịnị bụ usoro iji mee WPC decking?
A: (a) Gwakọta akụrụngwa dịka usoro ụfọdụ si dị, wee mee ka ha bụrụ pellets.
(b) Site na igwe extrusion na ebu, kpoo ndi ahu aka na profaịlụ ahaziri na nha.
(c) Ime elu ọgwụgwọ dị ka sanding ma ọ bụ embossing, mgbe ahụ bee WPC decking site rịọrọ ogologo tupu ngwugwu.
Nkịtị WPC Wall Cladding
WPC n'èzí mgbidi cladding
N'èzí Garden Weather Nguzogide WPC mara P ...
WPC mejupụtara decking, WPC decking n'ala, WPC ụlọ, WPC n'èzí decking, osisi plastic mejupụtara decking, N'èzí WPC decking,